Fampianarana momba ny FANAHY MASINA | Madagascar features website
Friday, August 10, 2012 - 12:57
Hita manerana ny Baiboly fa ny Fanahin' Andriamanitra dia nomeny ny olombelona.
Efa hatramin’ny vanim-potoanan’ny Testamenta Taloha izany, kanefa tsy tamin’ny olona rehetra akory, fa tamin’ireo olom-boafidin’ Andriamanitra ihany; toy ny Patriarka, Mosesy, Josoa, ary ireo Mpitsara nanarakaraka azy, ary koa mpaminany sy mpanjaka teo amin’ny Israely.
Na dia efa niasa tamin' ny alalan' ireo olona ireo aza ny Fanahy Masina, dia tamin' ny Pentekosta kosa vao nomena ny olona rehetra izany fanomezan-dehibe avy amin' Andriamanitra izany.
Ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina dia Andriamanitra Iray ihany, amin’ny natiorany, kanefa kosa samy manana ny maha-Izy Azy (personnalité-ny) sy ny andraikiny, izay mifameno sy tsy afa-misaraka.
Izany no mahatonga ny filazana an’ Andriamanitra hoe “Telo Izay Iray” (Trinite´ [Tri-Unité]), izay zavatra tsy azon' ny sain' olombelona saintsainina akory, satria heveriny fa tsy "logique" amin’ny "mathématiques".
Toy izao no fomba fiasan’io Andriamanitra Trinité io:
- Ny Ray no Mpamorona, kanefa dia niara-niasa taminy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina.
- Ny Zanaka no Mpamonjy, kanefa dia ny Ray sy ny Fanahy Masina no nahatonga Azy ho nofo (incarnation) ary naniraka Azy hankaty amin’izao tontolo izao.
- Ny Fanahy Masina no Mpanamasina, araka ny anarany rahateo; kanefa dia ny Ray sy ny Zanaka no naniraka Azy, ary Izy dia mandray avy amin' ny an' ny Zanaka, izay tsy hafa fa ny an' ny Ray ihany.
Tahaka ny nampanantenan’ Andriamanitra ny hihavian’ny Mesia (Jesosy izany, Gen:3:15) ho ety amin' izao tontolo izao, dia efa nampanantenainy mialoha ihany koa, tamin’ny alalan’ny mpaminany, ny hahatongavan’ny Fanahy Masina, amin’ny fomba ofisialy, ho an’ny mino rehetra eto amin’izao tontolo izao, fa tsy ho an' olona vitsivitsy fotsiny intsony, toy ny tamin' ny andron' ny fanekena taloha.
Ary dia io teny fikasana na fampanantenana ny amin’ny Fanahy Masina io indrindra no nampilazain’ Andriamanitra an’i Joela mpaminany hoe: “Ary rehefa afaka izany dia handatsaka ny Fanahiko amin’ny nofo rehetra Aho” (Joela:3:1-2).
Nohamafisin’i Jesosy tamin’ny Apostoly izany teny fampanantenana ny hiavian’ny Fanahy Masina izany, araka izay hita ao amin’ny Jaona toko faha-14 sy faha-16, izay amerimberenany hoe: “Ho avy aty aminareo ny Mpananatra (ny Fanahy Masina), Izay hirahin’ny Ray amin’ny anarako” - na koa “Izay hirahiko avy amin’ny Ray” - raha ny dikanteny grika no jerena.
Dia tanteraka tokoa izany teny fikasana momba ny Fanahy Masina izany tamin’ny andro Pentekosta.
Saturday, August 11, 2012 - 02:43
Io Pentekosta io dia fetim-pivavahana lehibe teo amin' ny Jiosy, ary nahavory vahoaka maro (Jiosy sy proselyta - [jentilisa niova ho Jiosy ara-pivavahana] - avy amin’ny vazantany efatra ho ao Jerosalema, isan-taona².
Koa dia indray Alahady, fetin’ny Pentekosta Jiosy tamin' izay, 50 andro taty aorian’ny andro nitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty, no nidinan’ny Fanahy Masina tamin’ny Apostoly sy ireo kristiana voalohany tao Jerosalema, tao amin’ny efitrano izay nivorian’izy ireo.
Tsy kisendrasendra no nahatonga izany, fa mba ho fanehoana mazava fa ny Fanahy Masina no santa-bokatry ny famonjena vitan’i Jesosy Kristy ho antsika.
Araka izany dia tsy hafa ilay Pentekostan’ny Testamenta Taloha - izay nodidian’i Jehovah Andriamanitra mba hankalazain’ny Zanak’Israely - fa tandindon’ io Pentekostan’ny Fanahy Masina io, izay fanomezana sarobidy voalohany sy fototra ho antsika mino, vokatry ny famonjen’i Jesosy.
Amin’ny maha- Andriamanitra ny Fanahy Masina dia tamin’ny fomba nahagaga, araka ny fomban’ Andriamanitra, no nisehoany tamin’ny Apostoly tamin’io andron’ny Pentekosta kristiana voalohany tany Jerosalema io, izay tantarain’i Lioka ao amin’ny Asa:2:1-12.
Toy izao izany fisehon’ny Fanahy Masina tamin’ny nahatongavany izany:
- Nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra, toy ny rivotra mahery nifofofofo nanenika ilay trano niangonan’ny mpianatra.
- Dia nisy lela nitarehin’afo (flammes) maro, niseho sy nipetraka tamin’izy ireo tsirairay avy isan' olona.
- Rehefa avy eo izy ireo dia niteny tamin’ny fiteny samihafa, araka ny nampitenenan’ny Fanahy Masina azy avy.
Hitantsika amin’izany fa hafa lavitra noho ilay nidinan’ny Fanahy Masina tamin’ny alalan’ny voromailala nankeo amin’i Jesosy tamin’ny batisany (Mat:3:13-17), ity nidinany tamin’ny Apostoly tamin’ny Pentekosta ity.
Tamin’ny batisan’i Jesosy mantsy dia fampitana Teny vavolombelona manambara ny maha-Zanak’ Andriamanitra Ray an’i Jesosy no nahatongavan’ny Fanahy Masina, fa tsy mbola hanao ny asany tsy akory.
Noho izany dia tamin’ny endriky ny voromahailalana (pigeon), izay famantarana (“symbole”-n’ny fampitan-kafatra) no nisehoan’ny Fanahy Masina.
Fa tamin’ny Pentekosta kosa, dia tonga hanao ny asany amin’ny fomba ofisialy, araka ny nanirahan’ny Ray sy ny Zanaka Azy ny Fanahy Masina, ka dia tamin’ny alalan’ireo hery sy fahefana hahatanterahany izany no nisehoany.
Rivotra mahery :
Ny rivotra mahery sy mifofofofo mantsy dia tsy hafa fa famantarana maneho ny herin’ Andriamanitra, izay miasa amim-pahefana, amin’ny fomba tsy hita maso kanefa tsy hay tohaina sy mahenika izao rehetra izao (“omnipotent” sy “omnipresent”).
Jesosy tenany, tamin’ilay resaka nataony tamin’i Nikodemosy no efa nilaza fa ny fiasan’ny Fanahy Masina dia toy ny fomban’ny rivotra, izay tsy hita maso ka tsy fantatra izay iaviany sy alehany, fa ny vokatry ny asany kosa dia hita maso sy azo tsapain-tànana tsara, sady tsy hain’iza na iza sakanana na ferana (Jaona:3:4-12).
Lela mitarehin' afo :
Ny afo indray dia maneho ny herin’ Andriamanitra manadio sy manamasina ary mitsara ihany koa, ka manamarina ny mino ao amin’i Jesosy Kristy, fa manameloka kosa ny tsy mety mino, ho amin’ny fahatezeran’ Andriamanitra .
Tsara ho marihina fa ny Fanahy Masina no iraka farany, miala nenina ny amin’ny famonjena antsika, ka izany no sady maha-fanamarinana sy fitsarana ny asany, arakaraka ny finoana na tsy finoan' ny olona an’i Jesosy ihany io.
Fiteny tsy fantatra :
Ny "fiteny samihafa" indray kosa dia herin’ Andriamanitra manome ho an’ny mino ny fahendrena sy fahalalana ary ny fankatoavana ny amin’ny Teniny masina (Filazantsarany), ary manome ihany koa ny fahefana sy fahafahana ary fampaherezana hanambara sy hitory ary hijoro ho vavolombelon’izany, ary hampianatra izany amin’ny olona rehetra manerana izao tontolo izao.
Izany no nahatonga an’i Jesosy niteny hoe: “Fa hahazo hery hianareo amin’ny hilatsahan’ny Fanahy Masina aminareo, ka ho vavolombeloko any Jerosalema sy Jodia sy Samaria ary hatramin’ny faran’ny tany” (Asa:1:8).
Marihina tsara fa teny fantatra, satria fitenim-pirenena samihafa no nampitenenin’ny Fanahy Masina ny Apostoly, fa tsy hoe teny tsy fantatra akory (Asa:2:7-12).
Ny teny tsy fantatra, izay tena tsy fantatra tokoa (tsy azo ny heviny), dia efa fomba fanao sady ivony tamin’ny fivavahan’ireo jentilisa tranainy, toy ny Egyptiana sy ny Kananita, etc...
Noho izany dia tsy misy ifandraisany amin’io “teny tsy fantatra” io ny “fitenin’ny Fanahy Masina” nampiteneniny ny mpianatra tamin'ny andro Pentekosta, ka izany no anamarihana mazava tsara eto hoe: “fiteny maro samihafa” fa tsy hoe “fiteny tsy fantatra”.
Ary dia ho fanomezana lanjany sy ivony io fiteny fantatra ampitenenin’ny Fanahy Masina ny mino io, no nananaran’i Paoly ny Fiangonan’i Korinto, izay nireheraha tamin’ny “fiteny tsy fantatra”, ka nahatonga tabataba sy korontana tao am-piangonana; satria na dia izay olona niteny izany aza tsy nahalala akory ny dikan' ny teny nolazainy teo.
Ho antsika ankehitriny, inona no asan' ny Fanahy Masina amintsika :
Araka ny voalazan’i Jesosy dia toy izao no votoatin’ny asan’ny Fanahy Masina amintsika mino, amin’ny maha-Mpananatra Azy:
* Mampianatra antsika ny zavatra rehetra Izy:
- Mampianatra antsika ny amin’ny toe-panahy araka an’ Andriamanitra sy Kristy, izay tokony harahintsika amin’ny maha-kristiana sy maha-vavolombelon’i Jesosy antsika Izy.
- Mampianatra antsika koa ny Tenin’ Andriamanitra (Baiboly) Izy, sady mampitoetra izany ao am-pontsika, mba tsy ho very na hadino na tsy hahavokatra, fa ho tonga fiainantsika ary hotorintsika sy hampianarintsika ny olona hafa koa.
- Mampianatra antsika hivavaka ihany koa ny Fanahy Masina, satria raha tsy Izy no manolo-tsaina antsika ny amin’izay vavaka tononintsika, dia tonga rediredy foana izany ka tsy hain’ Andriamanitra henoina sy valiana.
* Mampahatsiaro antsika ny zavatra rehetra momba an’i Jesosy Izy (Jao:16:) :
-Izy no mampahatsiaro antsika fa Jesosy no Zanak’ Andriamanitra, izay Tompo sy Mpamonjy ka tsy misy ahazoana famonjena sy fiainana mandrakizay ary fahasoavana afa-tsy amin’ny alalan’ny finoana sy fahatokiana Azy irery ihany.
- Ny Fanahy Masina koa no mampahatsiaro antsika fa zanak’ Andriamanitra mpandova ny fanjakany mandrakizay miaraka amin’i Jesosy isika; ka manana adidy sy andraikitra hampandroso ny Fiangonany, izay santatr’izany fanjakany izany eto an-tany.
Ary dia Izy Fanahy Masina no mitarika sy manazava ary mampahery antsika amin’izany fampandrosoana ny Fiangonan’ Andriamanitra eto amintsika izany.
- Ny Fanahy Masina ihany koa no mampahatsiaro antsika fa amin’ny maha-zanak’ Andriamanitra ao amin’i Jesosy, dia olona masina isika satria masina Izy Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika.
* Manamasina antsika Izy :
Io Fanahy Masina io, Izay monina aty am-pontsika, no mpanadio sy mpanamasina antsika amin’ny alalan’ny Tenin’ Andriamanitra sy ny Sakramenta, izay fiasam-pahasoavana anatanterahany ny asany rehetra.
Inona no zavatra hataontsika mba hahatanteraka izany antsakany sy andavany :
Ny irin’ny Fanahy Masina amintsika mba hahatontosany izany asany izany amintsika àry, dia ny mba tsy hitenenantsika ratsy Azy, na hanosehantsika vohontanana Azy, fa kosa ny hanomezantsika Azy toerana malalaka sy feno ao am-pontsika ary koa ny mba hangatahantsika mandrakariva ny fitarihany sy ny fanazavany ary ny fampaherezany.
* Manome hery ny Fanahy Masina :
Ireo Apostoly mpianatr' i Jesosy, nanomboka tamin’ny herinandro masina, dia very fanantenana tanteraka izy rehetra, satria nanaiky ho faty tsy niady akory Jesosy.
Nanomboka ny Zoma masina, dia olona mandositra, matahotra , mihidy ao an-trano, izany no hita. I Petera ohatra, izay filoha, sady nahery sy nafana fo indrindra tamin’izy rehetra, rehefa teo anatrehan’ny loza, dia nivadika, nandainga, ary niozona ho tsy mahalala an'i Jesosy, satria resin’ny tahotra ny fahafatesana.
Ary na dia efa tafatsangana tamin’ny maty aza Jesosy, dia mbola nisalasala be ihany ny sasany. Mbola tao ihany ilay tahotra sy tsi-finoana.
Ka dia hoy Jesosy ao amin'ny Asa:1:8 : “Hahazo hery hianareo amin’ny hilatsahan’ny Fanahy Masina aminareo".
Amin' izay fotoana izay dia tsy hatahotra na ho menatra intsony, fa kosa hijoro ho vavolombelona mihitsy, ary hanambara an' i Jesosy ao Jerosalema sy eran’i Jodia sy Samaria ary hatrany amin’ny faran’ny tany.
Tanteraka tokoa izany teny fikasana izany, tamin' ny nahatongavan' ny Fanahy Masina tamin' izy rehetra, tsirairay. Dia feno ny Fanahy Masina izy ka niteny, ary nanambara ny asa lehibe nataon’Andriamanitra.
Niala ny tahotra sy ny tsi-finoana rehetra, ka nanambara tamin’ny fahasahiana izy ireo, tsy nisy nahasakana azy intsony na dia nosamborina sady norahonana hovonoina aza (Asa:3:1-22).
Petera, ilay nandà tery aloha noho ny tahotra, dia nitsangana ka nanambara tamin’ny hery sy fahasahiana lehibe, tsy azo nosakanana intsony, ary taty afara dia novonoina, tsy nivadika intsony, fa dia niaritra hatramin'ny farany ny fahafatesana maritiora.
Isika koa :
Hoy ny Soratra Masina amintsika : « Aoka ho feno ny Fanahy hianareo ».
Isika koa dia nandray ny Fanahy Masina teo amin’ny Batisa ho amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Koa nahoana no mbola misy ny tahotra, fisalasalana, tsi-finoana, ...
Hoy ny teny eto: “Aoka ho feno ny Fanahy hianareo” (Efe:5:18).
Tamin’ny Andro Pentekosta, rehefa nirotsaka ny Fanahy Masina, dia feno ny Fanahy ny Mino rehetra, ka samy nanambara "ny asa lehibe nataon’Andriamanitra" (Asa:2:4).
Izany "asa lehibe nataon’Andriamanitra" izany dia tsy hafa fa ny famonjena nataon’i Jesosy ho an’izao tontolo izao : ny fijaliany sy fahafatesany noho ny fahotantsika, ary ny fitsanganany tamin’ny maty.
Jesosy nandresy ny devoly sy izao tontolo izao ary ny fahafatesana. Izy Izay nampijaliana sy nalaim-baraka, kanefa nataon’Andriamanitra ho Tompo sy Kristy. -- Io ilay zavatra hambara.
Dia tena tsy manan-kolazaina tokoa ve hianao ny amin’ny fahatsaran’i Jesosy ? Ny amin'ny fitiavany anao ? Ny fiarovany, sy fitantanany ny fiainanao ? ... Koa nahoana no mangina ?
Eo amin' ny mpirai-monina aminao, eo amin' ny samy mpiara-miasa, mpiara-mianatra, ... nahoana no dia mangina ?
Sa ve mbola miandry zava-mahagaga, toy ny feo mahery sy rivotra nifofofofo, ary zavatra hafa hita maso toy ny lelafo mizarazara ?
Angamba tokoa misy manontany hoe : Nahoana no toa tsy misy intsony ny zavatra manaitra sahala amin’izany ankehitriny ?
Ny sasany aza alaim-panahy mihitsy hitady izay zavatra mihetsiketsika sy mba manaitra; hany ka rehefa mandre hoe "ary indray misy an' izao" , dia lasa tokoa, tsy mba mieritreritra akory ny momba ny fanahiny, fa dia lasa mankany mba hahitana vahaolana amin'ny ara-nofo.
Andriamanitra ry havana no manao izay fahagagana tiany haseho, fa tsy anjarantsika (Mat:16:4); kanefa, raha ny marina, ny fahagagana lehibe indrindra dia izay efa naseho tamin’ny fiainanao, dia ny nananganana anao ho zanak' Andriamanitra sy ny nanomezana an’ i Jesosy "ho anao"; ary tsy izany ihany fa dia mbola nomen' Andriamanitra mihitsy koa ny Fanahiny.
Tsy misy zava-dehibe sy mahagaga mihoatra an' izany, ary na dia ny anjely any an-danitra aza dia gaga raha mandinika an' izany (1Pe:1:12).
Koa aoka isika tsy ho taitaitra raha misy milaza hoe "aty aminay Kristy", fa indro ny fanjakan' Andriamanitra dia ao anatinareo hoy Jesosy (Lioka:17:21).
Efa ampy amonjena anao izay nataon' Andriamanitra ho anao, fa aza mitady zavatra hafa intsony, fandrao ho very any.
Mampalahelo anie raha ny olona izay efa novonjen' i Jesosy no lasa mankany amin' ny fahaverezana indray, satria tsy nahatanty ny mena miraviravy.
Diniho tsara ilay teny ao amin' ny Efe:5:15-20
Amin’ny anaran’i Jesosy:
“ Koa tandremo tsara izay fandehanareo, mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala, fa tahaka ny hendry, ka hararaoty ny andro azo anaovan-tsoa, fa ratsy izao fiainana izao.
“ Ary noho izany dia aza manao adaladala, fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon’ny Tompo:
” Ary aza ho mamon-divay hianareo, fa amin’izany dia misy fanaranam-po amin’ny ratsy,
“ Fa aoka hofenoina ny Fanahy , ka mifampilazà amin’ny Salamo sy ny fihirana ary ny tonon-kiram-panahy,
“ Dia mihira sy mikalo ao am-ponareo ho an’ny Tompo,
“ Misaotra an’Andriamanatra Ray mandrakariva noho ny zavatra rehetra , amin’ny anaran’I Jesosy Kristy Tompo
“ Sady mifanaiky amin’ny fahatahorana an‘i Kristy”
Araka izany teny izany , ny hoe “feno ny Fanahy”, dia ny Kristiana , izay tsy anjakan’ny asan’ny nofo, tsy variana amin’ny rendrarendra sy ny fanaranam-pon’izao tontolo izao, izay mamatotra tsy ahaizana hanambara ny voninahitr’i Jesosy ; fa ny fiasana omena antsika mba hofenoina ny Fanahy isika, dia ny mihira amin’ny Salamo sy ny tonon-kiram-panahy, mankalaza an’i Jesosy.
Ny famonjena vitan’i Jesosy no amenoana ny fo, ka manao tonon-kiram-panahy noho ny fifaliana, noho ny toky fa manana Mpamonjy mahery .
Ny hoe feno ny Fanahy àry dia isika mankalaza an’i Jesosy, manambara Azy, miantso Azy ka tsy mamela an’izao tontolo izao ho mpibaiko ny fo amam-panahintsika.
Ny hoe feno ny Fanahy dia ny misaotra an’Andriamanitra Ray mandrakariva noho ny zavatra rehetra amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompontsika; fa tsy velon-taraina sy fimonomonana lava, ary indraindray dia manakiana ny fitondran’Andriamanitra.
Ny feno ny Fanahy dia ny mifanaiky amin’ny fahatahorana an’i Kristy. Izany dia milaza ny firaisam-po tanteraka amintsika samy isika, ary samy manaiky an’i Kristy.
Misy ny fampianarana izay milaza fa rehefa manana ny Fanahy hono dia tsy manota intsony.
Io koa dia diso, satria mazava tsara ny tenin’Andriamanitra, fa izay milaza fa tsy manam-pahotana dia mandainga, manamarin-tena, sady mampandainga an’Andriamanitra.
Ny asan’ny Fanahy amintsika anefa dia ny mahatonga antsika hiaiky ny fahotantsika, ka hanatona an’i Jesosy, mba ho voavela heloka ary ho voadio.
Zavatra tsy hay foronina izany, fa miankina amin’ny fitandremantsika ny Tenin’i Jesosy, ka mitoetra ao anatintsika izany.
Marihina ihany koa fa io "fahafenoana amin’ny Fanahy" io dia zavatra tsy azo ireharehana, fa raha mirehareha amin’izany isika dia efa ny nofo sahady no mitondra antsika na dia mihevi-tena ho tena ara-panahy aza isika. Ary tsy Jesosy intsony no omem-boninahitra fa dia olombelona. Zavatra tena mampalahelo izany.
Marobe isankarazany manko ny fandrika ataon’ny devoly, tsy mitsahatra izy manao izay handavoany ny olona.
Raha tsy azony amin' ny famoizam-po dia atosiny mankany amin' ny fireharehana indray.
Raha tsy azony amin’ny fireharehana dia tadiaviny hahitsoka ao anatin’ny fahakiviana sy fampoizampo lalina, sy ny hevi-petsy maro hafa tsy voatanisa.
Koa aoka isika tsy hatoritory, fa tena hiambina mihitsy, ary handray tokoa ny fiadian’Andriamanitra rehetra satria andro mahory tokoa izao, nefa isika manana an'i Jesosy, Ilay Mpandresy.
.... tapany faha-2 .....